Fialam-boly / aingam-panahy - Geofumadas
Fialam-boly / fitaomam-panahy
Hevitra sy hevitra avy amin'ny mpanoratra ny geofumadas
Mialà Venezoela ao anatin'ny fotoana fohy
Heveriko fa misy mahalala ny toe-javatra any Venezoela, hoy aho ny sasany satria fantatro fa tsy i Venezoela no ivon'izao rehetra izao, ary noho izany misy olona izay tsy mahalala akory izay misy azy. Betsaka amin'ireo mamaky ahy, mahatsapa sy mijaly amin'ny toe-javatra ivelany, vitsy no mino fa fantany ny zava-mitranga, manao fitsarana izy ireo ...
Fialam-boly / fitaomam-panahy, Politika sy demokrasia
Miala amin'i Venezoela mankany Kolombia - My Odyssey
Efa nahatsapa ny vatana tsy manana fanahy ve ianao? Tsapako tato ho ato. Ny zavamiaina dia lasa entina tsy fantatra izay tsapanao fa velona satria miaina. Fantatro fa tsy maintsy sarotra ny mahatakatra izany, ary vao mainka aza rehefa teo aloha dia nirehareha momba ny tenako ho olona tsara, feno fiadanam-panahy ary ...
Saripika 13 manan-tantara momba ny fandraharahana mahaolona
Tapitra ny taona 2015. Ho fankalazana, manome sary vitsivitsy anao izahay izay mampahatsiahy fa tsy nandalo fotoana ny fahafinaretana. Ny LZ 129 Hindenburg, seranam-piaramanidina karazana Zeppelin, potehin'ny afo rehefa tonga tany New Jersey tamin'ny 6 Mey 1937. Ny loza dia niteraka ny fahafatesan'ny 36 ...
Engineering, fanavaozana, Fialam-boly / fitaomam-panahy
Lafiny 6 hodinihina ao amin'ny Registry ny Integration - Cadastre
Ny fanaovana ny Cadastre sy ny Real Estate Registry hiara-miasa dia iray amin'ireo fanamby mahaliana indrindra amin'ny fizotran'ny fanavaozana ny rafitry ny zon'ny fananana. Matetika ny olana dia iray ihany, eny fa na dia mihoatra ny tontolontsika Hispanika aza. Etsy andaniny, ny ideolojian'ny ...
cadastre, My egeomates, Fialam-boly / fitaomam-panahy
Aingam-panahy - fironana amin'ny haitao GIS - ESRI UC andro voalohany
Ny taona 2005 no fotoana voalohany nanatrehako ny Konferansa ho an'ny mpampiasa ESRI, tao amin'io toerana io ihany: ny San Diego Convention Center, miaraka amin'ireo sora-baventy lehibe mihantona eo amin'ireo tohanan'ilay lalantsara fitaratra lava be. Mitsofoka anaty arabo misy volombava miraikitra sy palitao fotsy, brunette avy amin'ny kaontinanta afrikanina mitsiky ...
ArcGIS-ESRI, jeospatial - GIS, Fialam-boly / fitaomam-panahy
Foto-drafitr'asa Conference 2014: Fitaomam-panahy ho an'ny Hispanics
Ny herinandro lasa teo dia natao ny fihaonambe momba ny fotodrafitrasa ho an'ny taona 2014, tany London indray, izay nanatontosana ny loka antsoina hoe Be Inspired. Voarindra kokoa ny hetsika noho ny tranga hafa, ny rindranasa finday noforonin'izy ireo ho an'ny iOS sy Android no tsara indrindra; miaraka amin'ny fanavaozana, ...
Bentley Systems I-modely
Microstation-Bentley, Fialam-boly / fitaomam-panahy
UPSOCL - tranokala ahazoana aingam-panahy
Tsotra ny interface misy azy, tsy misy sidebars, tsy doka, endrika fikarohana fotsiny ary menio saika tsy hita maso misy sokajy dimy. Ity no tranonkala miteny Espaniola UPSOCL, natokana hizarana zavatra izay manan-danja amin'izao tontolo izao. Zavatra manentana ny saina, zavatra manitikitika, ary zavatra tokony ho hita. Ny ...
Internet sy Blogs, Fialam-boly / fitaomam-panahy
5 Fanomezan-danja ny fiarovana ny fitaovana fanadihadiana
Sarotra ny nandresy lahatra ny sefo tamin'izany fotoana izany; fa ny fitaovana hovidiana dia tokony hiantohana amin'ny halatra, fahasimbana ary lozam-pifamoivoizana. Azo takarina amin'ny tranga voalohany, miaraka amin'ny fanontaniana toy ny: Raha homena ho an'ny tanàna ny fitaovana aorian'izay, maninona no tsy aleo izy ireo mandoa ny fiantohana? Manohitra ny halatra? Moa ve tsy manome anao vintana ...
GPS / Fitaovana, Fialam-boly / fitaomam-panahy, topografia
Saika ny taratasy farany ho an'ireo mpiara-miasa amiko ... tsy niala aho
Androany folo andro lasa izay, araka ny fantatrao, najanoko ny sonia ny taratasy mifandraika amin'ny tetikasa iray izay nahatonga ahy ho be atao sy hahazo aingam-panahy mandritra ny fito taona. Azo antoka fa niandry fanazavana izy ireo, satria olona akaiky azy roa ihany no mahalala momba azy ireo andro vitsivitsy talohan'izay, na dia efa nokasaina hatramin'ny andro nanapahako hevitra ...
…amin'izao fotoana izao…
Rehefa manomboka mikotrana ny nostalgia hanova ny toe-draharaha ... mizara ny iray amin'ireo veloma farany tsara indrindra izay hitako tamin'ny iray amin'ireo mpampianatra ahy. Satria tsy te hampiditra anao ao amin'ny mailaka fanaovam-beloma fanaovam-beloma sy fanabeazana (zavatra hafa ianao) dia lazaiko aminao fa: ny 09:30 ny 28 jona, ...
Afaka mampiasa sary Google Earth ho an'ny cadastre ve aho?
Manana fotoana mahafinaritra miaraka amin'ny namana holandey iray androany, dia manasongadina ny fitoviana misy eo amin'ny fizotry ny homamiadana amin'ny psikolojia klinika sy ny tantaram-pitiavan'i Google Earth miaraka amina faran'ny diso: Dingana 1: Mampatahotra. Nisy teknisianina iray nidina an-tsaha hamaly ny fangatahana fandrefesana avy amin'ny tompona ...
cadastre, Google Earth / Maps, Fialam-boly / fitaomam-panahy
VBookz, ny tsara indrindra ho an'ny iPad-peo mpamaky / iPhone / iPod
Ny fampiharana amin'ny famakiana amin'ny feo avo dia tsy isalasalana fa manova ny fomba ankafizintsika ny boky. Ho ahy manokana dia tiako foana ny mankafy ny fanasongadinana sy ny naoty miaraka amin'ny boky tena izy, mijanona sy mamaky miadana mba hampisehoana ilay prosa tsara. Saingy tsy tonga tao an-tsaiko mihitsy ny hoe hanao dia lavitra ...
Fotoan-dehibe teo amin'ny 4 teo amin'ny tantaran'i Geofumadas
- Tokony hanana bilaogy isika ... Hoy ny lehibeko (HM), miaraka amin'ny masony tsy mifandray amin'ity tontolo ity ny masony. Nangoraka ahy ny tsy nahalalako ilay teny nolazain'ny lehilahy iray 73 taona talohan'ny fitarainako mafy momba ny antony nampifandraisana ny Internet amin'ireo tanàna manao fikajiana cadastral. Mihoatra noho ny nilazana azy tamin'ny ...
Recycled tamin'ny alina nanirako tao Goatemalà, amin'izao fotoana efa handehanako any izao dia mamela zavatra ho anao hampifalifaly ny tenanao aho. Fantatro fa tsy mameno ny fiheverana amin'ny teknolojia io ... fa misy izy io. Tovovavy mahafatifaty izy ary mainty ny maso ary volo mahitsy ny sorony, iray amin'ireo havana manana tombony amin'ny mpiasan'ny sekoly ambony ...
Ny fampidirana ny lafiny sosialy amin'ny fizotry ny fiofanana teknika
Tamin'ity herinandro ity dia niresaka tamin'ny iray amin'ireo mpiara-miasa amiko aho, ary nanao tantara vitsivitsy momba ny volo fotsy izay nitondran'ny taona anay tamin'ireto fizotran'ny fampandrosoana ireto - ny ahy bebe kokoa noho ilay manohana ny faritra solaany. Nanazava aho fa ny fivoaran'ny fanelingelenana nataoko dia nahatonga ahy hiova avy amin'ny sehatry ny kanto ho injeniera ary avy eo mankany ...
Fampianarana CAD / GIS, Fialam-boly / fitaomam-panahy
Ahoana ny fifandraisana amin'ny Internet any amin'ny faritra lavitra
Nanontany tena foana aho hoe inona no hataoko raha mila mifindra any amin'ny tanàna kely iray aho, izay voafetra ny fahazoana mifandray izay ankafizinay eto an-tanàna. Bebe kokoa izao fa ny maniasantsika amin'ny fifandraisana izay nateraky ny Internet dia nahatonga antsika hahafantatra mailaka vaovao, vaovao amin'ny tambajotra sosialy ...
Fialam-boly / fitaomam-panahy, Tsangatsangana
32 taona aty aoriana, mampifandray tariby, manidy tsingerina
Ity dia fialan-tsasatra fahavaratra ity dia mihoatra ny fanala fahasahiranana fotsiny. Tsy ho ahy irery fa ho an'ny sisa amin'ny fianakaviako izay niaraka tamiko. Indraindray ny fampitahana ampifandraisin'ireo kofehy dia toa tena nisy tokoa ka mila fotoana hisaintsainana. Ny hafanana amin'ny fahavaratra ...